အောင်ဆန်းလင်း (သို့မဟုတ်) ကိုကိုလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / အောင်ဆန်းလင်း (သို့မဟုတ်) ကိုကိုလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး
အောင်ဆန်းလင်း (သို့မဟုတ်) ကိုကိုလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး
Apann Pyay 8:49 AM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
(၁) ။ ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူ့အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုကိုလင်းကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ခန်းတည်း အတူတူနေပြီး တတွဲတွဲနှင့် မခွာဘဲ အတူစား၊ အတူသွား၊ အတူကစားဖြင့် ယုယကြင်နာ ချစ်ခင်ခဲ့ကြပါသည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုကိုလင်း(ခ) အောင်ဆန်းလင်းကို ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား၍ ဗုဒ္ဓဟူးသားဖြစ်သည်။ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူ ပ်က သူ့သားကို ချစ်စနိုးနဲ့ `ငလင်းကြီး´ ဟု ခေါ်ပါသည်။
အဲ့ဒီအချိန်က ဗိုလ်ချူ ပ်အောင်ဆန်း မိသားစုနားမှာ အနီးကပ်ရှိခဲ့သူတွေက အပါးတော်မြဲ ဗိုလ်ထွန်းလှ၊ ကိုယ်ရံတော် ဗိုလ်မင်းလွင်၊ ကားဒရိုင်ဘာ ရဲဘော်ကျော်စိန်တို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ဗိုလ်ချူ ပ်ရဲ့ကလေးများနှင့် အနီးကပ် ဆက်ဆံခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအထဲမှ ဗိုလ်မင်းလွင်သည် နေ့စဉ် ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်းရေးသူဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲမှတ်တမ်းမှာ ရေးထားခဲ့တာက-
`ည၊ ဒေါ်ခင်ကြည်၊ ဗိုလ်ချူ ပ်တို့ရဲ့သား အောင်ဆန်းလင်း၊ အချစ်ဆုံးကောင် သေဆုံး၍ စိတ်မချမ်းသာလှ´ (ညဘက်မှာ သတင်းစကားရတာကို ရေးထားတာပါ) ။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုကိုလင်းသည် အားလုံး၏ အချစ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုကိုလင်းကို အားလုံးကချစ်ခဲ့ပြီး ညီမဖြစ်သူ မမစုကလည်း သိတ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ Voice of Hope စာအုပ်ထဲတွင် သူမ၏ ပြောကြားချက်အရ `သူ့ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ ကျွန်မအတွက် သိပ်ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ´ ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မ အကြီးအကျယ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါ `ထိတ်လန့်ကြေကွဲ´ တယ်လို့ ခေါ်ရမှာပါပဲ။ တကယ်တော့ သူ့ကို ကျွန်မ နောင်ဘယ်တော့မှ ထပ်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်က ကျွန်မကို အများကြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲသွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုကိုလင်းနဲ့ မမစုက တစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်ပါ။ ကိုကိုလင်း ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ကိုးနှစ်သား၊ မမစုက ရှစ်နှစ်သမီးပါ။ တစ်ခါတုန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စကားတစ်ခွန်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ “အခုအချိန်မှာ ကိုကိုလင်းသာရှိရင် သိတ်ကောင်းမှာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ သူမရှိစေချင်တဲ့အကြောင်းက စိတ်ဓာတ်တူတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လေ။ ကိုကိုလင်းက ၁၀ ရက်နေ့မွေးတော့ တစ်ဂဏန်းသမား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ၁၉ ရက်နေ့မွေးတော့ တစ်ဂဏန်းသမား။ မောင်နှမ နှစ်ဦးစလုံးက တစ်ဂဏန်းသမားတွေဆိုတော့ `အခုတစ်ယောက်ထဲနဲ့တင် ပွဲကကြည့်ကောင်းနေတာ၊ နှစ်ယောက်ဆိုရင်ဖြင့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မှာ ဧကန်အမှန်မုချပါပဲ။ (ဆက်ရန်)
ကိုကိုလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး နောက်ဆက်တွဲ (၂)
(၂) ။ ။အလွန်ချစ်ခဲ့ကြရတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက် တစ်နေ့မှာ စတိုခန်းထဲဝင်ပြီး ငှက်ပျောသီး ခိုးစားနေကြစဉ်တွင် တွေ့တဲ့တစ်စုံတစ်ဦးက တိုင်ပြောလိုက်တော့ မိခင်ကြီးရဲ့ ဆော်ပလော်တီးခံရပါတယ်။ ၁၆- ၁- ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ မောင်နှမနှစ်ယောက် ခြံထဲမှာ ဆော့ကစားရာမှ သူကစားနေတဲ့သေနတ်က ရေထဲကျသွားတော့ ကိုကိုလင်းက ဆင်းဆယ်တာ၊ အရေးထဲမှာမှ သူ့ရဲ့ညှပ်ဖိနပ်တစ်ဖက်က ရွှံ့ ဗွက်ထဲမှာနစ်နေတော့ အခြေအနေက ရှုပ်ထွေးပြီး ရေကန်ထဲရေနစ်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်က မမစုက ကစားလို့မောတာနဲ့ အိမ်ထဲဝင်ပြီး ရေသောက်နေချိန်ပေါ့။ မကြာမီမှာ ရေကန်ထဲမှာ ပေါလောမျောနေတဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကိုကိုလင်းအလောင်းကို တွေ့ကြရပါတယ်။ လူကြီးတွေ သိလို့ ဆင်းဆယ်ချိန်မှာ အသက်မရှိတော့ပေ။ သူသိပ်ချစ်တဲ့အစ်ကို သူ့မျက်စိအောက်မှာ သေမှုသေခင်းဖြစ်နေတာကို ဝင်ပြီး မကယ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘဝမှာ ယူကျူံးမရ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကိုလင်းကို ကြံတောသုဿ န်မှာ ဂူသွင်းသဂြိုလ်စဉ်က သူရှိစဉ် သူနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ကစားစရာပစ္စည်းတွေပါ ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး သူ့သေနတ်ရောပေါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူကွယ်လွန်ပြီး (၄၃) နှစ်အကြာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ကြံတောသုဿ န်ကို ဖျက်သိမ်းမှာဖြစ်လို့ သူ့အုတ်ဂူကို ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ စည်ပင်က နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ အရိုးကောက်ရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မိုဃ်းလင်းနှင့် ကိုချိူ အောင်သန်း (ဦးအောင်သန်းရဲ့သား) တို့ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ နိုဝင်ဘာလထဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဦးချိူ အောင်သန်းနဲ့ ဖိုးလေးတို့ သွားရောက်ပြီး စည်ပင်သာယာမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကိုကိုလင်း၏ အုတ်ဂူကိစ္စကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကလည်း အကူအညီ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ စည်ပင်ရုံးက အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တချိူ့ ရဲ့ တူးဖော်ပြီး အရိုးတွေကို စဉ့်အိုးထဲမှာ နာမည်စာတန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆွဲထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ အရိုးအိုး၊ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင် သခင်တွေရဲ့ အရိုးအိုး၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေ၊ စာရေးဆရာ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အရိုးအိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
စည်ပင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖိုးလေးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ `ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက တစ်ချိန်က တိုင်းပြည်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ သီးသန့်ဂူပြန်သွင်းပြီး ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်´ လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ စည်ပင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း `ကျွန်တော်တို့မှာ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ထောက်ကြန့်မှာရှိတဲ့ ဓနသဟာယစစ်သချိူ င်းလိုပုံစံမျိူးမြက်ခင်းတွေ၊ မီးတိုင်တွေနဲ့ ကမ္ပည်းကျောက်စာထိုးပြီး အဆင့်မြင့်မြင့် လုပ်ပေးမှာပါ´ ဟူ၍ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ညနေစောင်းတဲ့အထိ ကိုကိုလင်းအုတ်ဂူတူးတာက မပြီးသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ရပ်ထားပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်ဖက်ကျမှ ဆက်တူးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ အရိုးတွေ တွေ့ပြီး တူးဖော်ခါနီးမှ ခေါ်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ (ဆက်ရန်)
‘ကိုကိုလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီး နောက်ဆက်တွဲ'(၃)
(၃) ။ ။နောက်တစ်နေ့ နံနက်စောစောထပြီး အုတ်ဂူကိစ္စကို ဆက်တူးစေခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ နာရီလောက်ဆိုရင် အရိုးတွေ့နိုင်တယ်ပြောလို့ ခြံထဲကိုပြန်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူမကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီး အုတ်ဂူတူးတာကို ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ အရိုးတွေ့ပြီဆိုတော့ ယူလာခဲ့တဲ့ မြေအိုးထဲကို တစ်ခုချင်းယူပြီး သူမကိုယ်တိုင် ထည့်ပါတယ်။ သံချေးအထပ်ထပ်တက်နေတဲ့ မော်တော်ကားအင်ဂျင်ကိုယ်ထည်တစ်ခုတွေ့တော့ `အဲ့ဒါ ကိုကိုလင်းရဲ့ မော်တော်ကားလေး´ ဆိုပြီး ပြောပြပါတယ်။ `ကိုကိုလင်း အနှစ်သက်ဆုံး အမြဲတမ်း ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ မော်တော်ကားလေးပေါ့´ လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးတူးဖော်ပြီးချိန်မှာ စည်ပင်တာဝန်ရှိသူတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုပါတယ်။ နောက် ကိုကိုလင်း အရိုးအိုး၊ အုတ်ဂူမှာနာမည်ထွင်းထားတဲ့ စကျင်ကျောက်ပြားတို့ကို ယူလာပြီး ခြံထဲက ကန်စပ်နားရှိ သရက်ဖြူ ပင်ကြီးအောက်မှာ ယာယီထားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပါတ်အကြာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အရိုးအိုးကို ကားပေါ်တင်ပြီး သန်လျင်ဘက်ကို မောင်းခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကားသုံးစီးနဲ့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က နောက်ကလိုက်လာပါတယ်။ သန်လျင်တံတားပေါ် ကားဖြတ်ချိန်မှ သန်လျင်အနီးပင်လယ်ဝမှာ အရိုးအိုးကို သွားမျှောမယ်ဆိုတာ ရိပ်မိသွားကြတော့ ချက်ချင်းပဲ သန်လျင်ရေတပ်စခန်ကို အကြောင်းကြား၊ ရေတပ်ကလည်း ရေငုတ်တပ်ဖွဲ့ကလူတွေ အကြောင်းကြားပြီး ရေကြောင်းကနေ လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်သတင်းတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ရေလယ်ဘုရားတည်ရှိတဲ့ မှော်ဝန်းမြစ်အတိုင်း ပင်လယ်ထွက်ပေါက်နားကို စက်လှေတွေငှါးပြီး အရိုးအိုးကိုမျှောရန် စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘေးနားကနေ လုံခြုံ ရေးအဖွဲ့၊ ရေငုတ်စစ်သည်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အဖွဲ့ကို လိုက်ပါပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဤသို့ဖြင့် နောက်ဆုံးတွင်တော့ `ကိုကိုလင်းကတော့ ကြံတောသုဿ န်ကနေ ပင်လယ်ပြင်မှာ အနားယူသွားခဲ့ရပါပြီ´ ။
အဲ့ဒီနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စည်ပင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြားတဲ့အတိုင်း ထောက်ကြန့် ဓနသဟာယစစ်သချိူ င်းပုံစံမျိူးထားရှိပေးမှာပါလို့ ပြန်ပြောပြခဲ့တော့ `ပြုံးပြီး နားထောင်နေပါတယ်´ ။ ယုံလား- မယုံဘူးလားတော့ မသိခဲ့ပါ။
ကိုကိုလင်းအုတ်ဂူလေးက ပျောက်သွားပြီး ပင်လယ်ဝရောက်သွားခဲ့ရတာကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ `ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး၊ ထပ်ပြောင်းချင် ပြောင်းနေဦးမှာ´ ဆိုတဲ့ အတွေးစိတ်ကူးနဲ့ သာ၍ သာ၍ ဝေးရာကိုသွားထားရမှ စိတ်ချရမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စီစဉ်မှုက မှန်နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ကြံတောမြေမှာ ရှော့ပင်းမောလ်ကွန်ဒိုနဲ့ ကြံတောကွန်ပေါင်းကြီးက ပေါ်လာတော့မှာ။ ရေဝေးမြေနေရာဆိုလည်း စက်မှုဇုန်အမည်ခံပြီး မတန်တဆ အမြတ်တင်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ မြေကွက်ထုတ်ရောင်းစားမယ့် သူဋ္ဌေးတွေ ထောကြဦးမှာပါ။ မြေဆိုလို့ သချိူ င်းမြေနဲ့ ဝတ္တုကံမြေပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အာဇာနည်ကုန်းမြေဆို နှုတ်ခမ်းသားပဲ့နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုကိုလင်းကို သူ့နှမက သူသိတ်ချစ်တဲ့ သူ့အစ်ကို ကိုကိုလင်းကို အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာ နေစေချင်လို့ စီစဉ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
တကယ့်ကို လွမ်းမောစရာ၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ အဖြစ်အပျက်လေးပါပဲဗျာ..
ကိုးကားပြီး ဖော်ပြတာ မိုဃ်းလင်း (ဖိုးလေး) ရေး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်..
ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကို Credit ပေးပါတယ်..
Credit. Aung Kyaw Moe တိုက်ရိုက်ကူးယူ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
(၁) ။ ။ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ သူ့အဈကိုဖွဈသူ ကိုကိုလငျးကို အခဈြဆုံးဖွဈသညျ။ ငယျစဉျကတညျးက တဈခနျးတညျး အတူတူနပွေီး တတှဲတှဲနှငျ့ မခှာဘဲ အတူစား၊ အတူသှား၊ အတူကစားဖွငျ့ ယုယကွငျနာ ခဈြခငျခဲ့ကွပါသညျ။ အဈကိုဖွဈသူ ကိုကိုလငျး(ခ) အောငျဆနျးလငျးကို ၁၉၄၄ ခုနှဈ၊ မလေ ၁၀ ရကျနတှေ့ငျ မှေးဖှား၍ ဗုဒ်ဓဟူးသားဖွဈသညျ။ ဖခငျကွီး ဗိုလျခြူ ပျက သူ့သားကို ခဈြစနိုးနဲ့ `ငလငျးကွီး´ ဟု ချေါပါသညျ။
အဲ့ဒီအခြိနျက ဗိုလျခြူ ပျအောငျဆနျး မိသားစုနားမှာ အနီးကပျရှိခဲ့သူတှကေ အပါးတျောမွဲ ဗိုလျထှနျးလှ၊ ကိုယျရံတျော ဗိုလျမငျးလှငျ၊ ကားဒရိုငျဘာ ရဲဘျောကြျောစိနျတို့ဖွဈပွီး သူတို့ဟာ ဗိုလျခြူ ပျရဲ့ကလေးမြားနှငျ့ အနီးကပျ ဆကျဆံခဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ထိုအထဲမှ ဗိုလျမငျးလှငျသညျ နစေ့ဉျ ဒိုငျယာရီမှတျတမျးရေးသူဖွဈသညျ။ သူ့ရဲ့ ၁၉၅၃ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျနေ့ ရကျစှဲမှတျတမျးမှာ ရေးထားခဲ့တာက-
`ည၊ ဒျေါခငျကွညျ၊ ဗိုလျခြူ ပျတို့ရဲ့သား အောငျဆနျးလငျး၊ အခဈြဆုံးကောငျ သဆေုံး၍ စိတျမခမျြးသာလှ´ (ညဘကျမှာ သတငျးစကားရတာကို ရေးထားတာပါ) ။ ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ကိုကိုလငျးသညျ အားလုံး၏ အခဈြဆုံးဖွဈခဲ့တယျဆိုတာကို သိစနေိုငျပါတယျ။ ကိုကိုလငျးကို အားလုံးကခဈြခဲ့ပွီး ညီမဖွဈသူ မမစုကလညျး သိတျခဈြခဲ့ပါတယျ။ Voice of Hope စာအုပျထဲတှငျ သူမ၏ ပွောကွားခကျြအရ `သူ့ရဲ့ သဆေုံးမှုဟာ ကြှနျမအတှကျ သိပျကွီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတဈခုပါ´ ။ အဲဒီအခြိနျက ကြှနျမ အကွီးအကယျြ ဝမျးနညျးကွကှေဲခဲ့တယျ။ အဲ့ဒါ `ထိတျလနျ့ကွကှေဲ´ တယျလို့ ချေါရမှာပါပဲ။ တကယျတော့ သူ့ကို ကြှနျမ နောငျဘယျတော့မှ ထပျမတှနေို့ငျတော့ဘူးဆိုတဲ့အခကျြက ကြှနျမကို အမြားကွီး ဝမျးနညျးကွကှေဲသှားစခေဲ့ပါတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ကိုကိုလငျးနဲ့ မမစုက တဈနှဈကွီးတဈနှဈငယျပါ။ ကိုကိုလငျး ကှယျလှနျခြိနျတှငျ ကိုးနှဈသား၊ မမစုက ရှဈနှဈသမီးပါ။ တဈခါတုနျးကတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ စကားတဈခှနျးကို ပွောခဲ့ပါတယျ။ “အခုအခြိနျမှာ ကိုကိုလငျးသာရှိရငျ သိတျကောငျးမှာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ သူမရှိစခေငျြတဲ့အကွောငျးက စိတျဓာတျတူတဲ့ မောငျနှမနှဈယောကျလေ။ ကိုကိုလငျးက ၁၀ ရကျနမှေ့ေးတော့ တဈဂဏနျးသမား၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကလညျး ၁၉ ရကျနမှေ့ေးတော့ တဈဂဏနျးသမား။ မောငျနှမ နှဈဦးစလုံးက တဈဂဏနျးသမားတှဆေိုတော့ `အခုတဈယောကျထဲနဲ့တငျ ပှဲကကွညျ့ကောငျးနတော၊ နှဈယောကျဆိုရငျဖွငျ့ ပှဲကွီးပှဲကောငျးဖွဈမှာ ဧကနျအမှနျမုခပြါပဲ။ (ဆကျရနျ)
ကိုကိုလငျး၏ နောကျဆုံးခရီး နောကျဆကျတှဲ (၂)
(၂) ။ ။အလှနျခဈြခဲ့ကွရတဲ့ မောငျနှမနှဈယောကျ တဈနမှေ့ာ စတိုခနျးထဲဝငျပွီး ငှကျပြောသီး ခိုးစားနကွေစဉျတှငျ တှတေဲ့တဈစုံတဈဦးက တိုငျပွောလိုကျတော့ မိခငျကွီးရဲ့ ဆျောပလျောတီးခံရပါတယျ။ ၁၆- ၁- ၁၉၅၃ ခုနှဈမှာ မောငျနှမနှဈယောကျ ခွံထဲမှာ ဆော့ကစားရာမှ သူကစားနတေဲ့သနေတျက ရထေဲကသြှားတော့ ကိုကိုလငျးက ဆငျးဆယျတာ၊ အရေးထဲမှာမှ သူ့ရဲ့ညှပျဖိနပျတဈဖကျက ရှံ့ ဗှကျထဲမှာနဈနတေော့ အခွအေနကေ ရှုပျထှေးပွီး ရကေနျထဲရနေဈသှားပါတော့တယျ။ အဲဒီအခြိနျက မမစုက ကစားလို့မောတာနဲ့ အိမျထဲဝငျပွီး ရသေောကျနခြေိနျပေါ့။ မကွာမီမှာ ရကေနျထဲမှာ ပေါလောမြောနတေဲ့ သဆေုံးသှားတဲ့ ကိုကိုလငျးအလောငျးကို တှကွေ့ရပါတယျ။ လူကွီးတှေ သိလို့ ဆငျးဆယျခြိနျမှာ အသကျမရှိတော့ပေ။ သူသိတျခဈြတဲ့အဈကို သူ့မကျြစိအောကျမှာ သမှေုသခေငျးဖွဈနတောကို ဝငျပွီး မကယျနိုငျတဲ့အတှကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဘဝမှာ ယူကြူံးမရ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
ကိုကိုလငျးကို ကွံတောသုဿ နျမှာ ဂူသှငျးသဂွိုလျစဉျက သူရှိစဉျ သူနှဈသကျခဲ့တဲ့ ကစားစရာပစ်စညျးတှပေါ ထညျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ သူအကွိုကျနှဈသကျဆုံး သူ့သနေတျရောပေါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူကှယျလှနျပွီး (၄၃) နှဈအကွာ ၁၉၉၆ ခုနှဈမှာ ကွံတောသုဿ နျကို ဖကျြသိမျးမှာဖွဈလို့ သူ့အုတျဂူကို ဖယျရှားပေးရမယျလို့ အကွောငျးကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခါမှာ စညျပငျက နောကျဆုံးသတျမှတျရကျမတိုငျမီ အရိုးကောကျရနျအတှကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ မိုဃျးလငျးနှငျ့ ကိုခြိူ အောငျသနျး (ဦးအောငျသနျးရဲ့သား) တို့ကို တာဝနျပေးခဲ့ပါသညျ။
၁၉၉၆ နိုဝငျဘာလထဲလို့ ထငျပါတယျ။ ဦးခြိူ အောငျသနျးနဲ့ ဖိုးလေးတို့ သှားရောကျပွီး စညျပငျသာယာမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ကိုကိုလငျး၏ အုတျဂူကိစ်စကို ပွောဆိုခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့အားလုံးကလညျး အကူအညီ ပေးခဲ့ကွပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ စညျပငျရုံးက အခနျးတဈခနျးထဲမှာ မွနျမာနိုငျငံ၌ ထငျပျေါကြျောကွားခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတခြိူ့ ရဲ့ တူးဖျောပွီး အရိုးတှကေို စဉျ့အိုးထဲမှာ နာမညျစာတနျးတှနေဲ့ ခြိတျဆှဲထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျအောငျကြျောရဲ့ အရိုးအိုး၊ ဒို့ဗမာအစညျးအရုံးခေါငျးဆောငျ သခငျတှရေဲ့ အရိုးအိုး၊ ရဲဘျောသုံးကြိပျဝငျတှေ၊ စာရေးဆရာ၊ အနုပညာရှငျတှရေဲ့ အရိုးအိုးတှေ တှခေဲ့ရပါတယျ။
စညျပငျတာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဖိုးလေးက ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ `ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေ တဈခြိနျက တိုငျးပွညျမှာ ထငျပျေါကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့အားလုံးကို တဈနရောထဲမှာ သီးသနျ့ဂူပွနျသှငျးပွီး ဂုဏျပွုသငျ့ပါတယျ´ လို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ စညျပငျတာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျကလညျး `ကြှနျတျောတို့မှာ အစီအစဉျ ရှိပါတယျ။ ထောကျကွနျ့မှာရှိတဲ့ ဓနသဟာယစဈသခြိူ ငျးလိုပုံစံမြိူးမွကျခငျးတှေ၊ မီးတိုငျတှနေဲ့ ကမ်ပညျးကြောကျစာထိုးပွီး အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ လုပျပေးမှာပါ´ ဟူ၍ ပွနျလညျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနကေ့ ညနစေောငျးတဲ့အထိ ကိုကိုလငျးအုတျဂူတူးတာက မပွီးသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ရပျထားပွီး နောကျတဈနမေ့နကျဖကျကမြှ ဆကျတူးဖို့ ပွောဆိုခဲ့ပွီး ပွနျလာခဲ့ကွပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုတော့ အရိုးတှေ တှပွေီ့း တူးဖျောခါနီးမှ ချေါရနျ စီစဉျထားခဲ့ပါတယျ။ (ဆကျရနျ)
‘ကိုကိုလငျး၏ နောကျဆုံးခရီး နောကျဆကျတှဲ'(၃)
(၃) ။ ။နောကျတဈနေ့ နံနကျစောစောထပွီး အုတျဂူကိစ်စကို ဆကျတူးစခေဲ့ပါတယျ။ ၁၀ နာရီလောကျဆိုရငျ အရိုးတှနေို့ငျတယျပွောလို့ ခွံထဲကိုပွနျပွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ပွနျပွောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခါမှာ သူမကိုယျတိုငျလိုကျလာပွီး အုတျဂူတူးတာကို ကွညျ့ရှုခဲ့ပါတယျ။ အရိုးတှပွေီ့ဆိုတော့ ယူလာခဲ့တဲ့ မွအေိုးထဲကို တဈခုခငျြးယူပွီး သူမကိုယျတိုငျ ထညျ့ပါတယျ။ သံခြေးအထပျထပျတကျနတေဲ့ မျောတျောကားအငျဂငျြကိုယျထညျတဈခုတှတေ့ော့ `အဲ့ဒါ ကိုကိုလငျးရဲ့ မျောတျောကားလေး´ ဆိုပွီး ပွောပွပါတယျ။ `ကိုကိုလငျး အနှဈသကျဆုံး အမွဲတမျး ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ မျောတျောကားလေးပေါ့´ လို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ အားလုံးတူးဖျောပွီးခြိနျမှာ စညျပငျတာဝနျရှိသူတှကေို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ကြေးဇူးတငျစကားပွောဆိုပါတယျ။ နောကျ ကိုကိုလငျး အရိုးအိုး၊ အုတျဂူမှာနာမညျထှငျးထားတဲ့ စကငျြကြောကျပွားတို့ကို ယူလာပွီး ခွံထဲက ကနျစပျနားရှိ သရကျဖွူ ပငျကွီးအောကျမှာ ယာယီထားခဲ့ပါတယျ။
တဈပါတျအကွာမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက အရိုးအိုးကို ကားပျေါတငျပွီး သနျလငျြဘကျကို မောငျးခိုငျးပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျက ကားသုံးစီးနဲ့ လုံခွုံရေးအဖှဲ့က နောကျကလိုကျလာပါတယျ။ သနျလငျြတံတားပျေါ ကားဖွတျခြိနျမှ သနျလငျြအနီးပငျလယျဝမှာ အရိုးအိုးကို သှားမြှောမယျဆိုတာ ရိပျမိသှားကွတော့ ခကျြခငျြးပဲ သနျလငျြရတေပျစခနျကို အကွောငျးကွား၊ ရတေပျကလညျး ရငေုတျတပျဖှဲ့ကလူတှေ အကွောငျးကွားပွီး ရကွေောငျးကနေ လုံခွုံရေးယူပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဉျသတငျးတှကေို နောကျပိုငျးမှာ ကွားသိခဲ့ရပါတယျ။ ရလေယျဘုရားတညျရှိတဲ့ မှျောဝနျးမွဈအတိုငျး ပငျလယျထှကျပေါကျနားကို စကျလှတှေငှေါးပွီး အရိုးအိုးကိုမြှောရနျ စီစဉျခဲ့ကွပါတယျ။ ဘေးနားကနေ လုံခွုံ ရေးအဖှဲ့၊ ရငေုတျစဈသညျလုံခွုံရေးအဖှဲ့တှကေ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏အဖှဲ့ကို လိုကျပါပွီး စောငျ့ရှောကျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဤသို့ဖွငျ့ နောကျဆုံးတှငျတော့ `ကိုကိုလငျးကတော့ ကွံတောသုဿ နျကနေ ပငျလယျပွငျမှာ အနားယူသှားခဲ့ရပါပွီ´ ။
အဲ့ဒီနောကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို စညျပငျတာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျ ပွောကွားတဲ့အတိုငျး ထောကျကွနျ့ ဓနသဟာယစဈသခြိူ ငျးပုံစံမြိူးထားရှိပေးမှာပါလို့ ပွနျပွောပွခဲ့တော့ `ပွုံးပွီး နားထောငျနပေါတယျ´ ။ ယုံလား- မယုံဘူးလားတော့ မသိခဲ့ပါ။
ကိုကိုလငျးအုတျဂူလေးက ပြောကျသှားပွီး ပငျလယျဝရောကျသှားခဲ့ရတာကတော့ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ `ပွောလို့ရတာမဟုတျဘူး၊ ထပျပွောငျးခငျြ ပွောငျးနဦေးမှာ´ ဆိုတဲ့ အတှေးစိတျကူးနဲ့ သာ၍ သာ၍ ဝေးရာကိုသှားထားရမှ စိတျခရြမယျဆိုပွီး စီစဉျခဲ့တဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ စီစဉျမှုက မှနျနပေါတယျ။ မကွာခငျမှာ ကွံတောမွမှော ရှော့ပငျးမောလျကှနျဒိုနဲ့ ကွံတောကှနျပေါငျးကွီးက ပျေါလာတော့မှာ။ ရဝေေးမွနေရောဆိုလညျး စကျမှုဇုနျအမညျခံပွီး မတနျတဆ အမွတျတငျဈေးနှုနျးတှနေဲ့ မွကှေကျထုတျရောငျးစားမယျ့ သူဋ်ဌေးတှေ ထောကွဦးမှာပါ။ မွဆေိုလို့ သခြိူ ငျးမွနေဲ့ ဝတ်တုကံမွပေဲ ကနျြပါတော့တယျ။ အာဇာနညျကုနျးမွဆေို နှုတျခမျးသားပဲ့နပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ကိုကိုလငျးကို သူ့နှမက သူသိတျခဈြတဲ့ သူ့အဈကို ကိုကိုလငျးကို အေးခမျြးတဲ့နရောမှာ နစေခေငျြလို့ စီစဉျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတော့တယျ။
တကယျ့ကို လှမျးမောစရာ၊ ဝမျးနညျးကွကှေဲစရာ အဖွဈအပကျြလေးပါပဲဗြာ..
ကိုးကားပွီး ဖျောပွတာ မိုဃျးလငျး (ဖိုးလေး) ရေး ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ဖွဈပါတယျ..
ဓာတျပုံပိုငျရှငျကို Credit ပေးပါတယျ..
Credit. Aung Kyaw Moe တိုကျရိုကျကူးယူ ပွနျလညျမြှဝပေေးခွငျးဖွဈပါသညျ